ब्लग आइतबार, मंसिर १५, २०७६
नेपालमा करिया (कमारा–कमारी) प्रथा अन्त्यको घोषणा हुँदा १९८१ सालमा देशको जनसंख्या ५५ लाख ५७ हजार ७८८ थियो ।
त्यसमध्ये करियाहरू भने ५१ हजार ४१९ रहेछन् । त्यस वेलासम्म दासका रूपमा घरेलु कामदारको हाटबजारमै खुला किनबेच हुन्थ्यो । त्यस्तो किनबेचमा कमारो भन्दा कमारीको मूल्य बढी हुन्थ्यो । किनभने कमारीले पाएको शिशु मालिककै सम्पत्ति हुन्थ्यो, जुन उसले पछि बिक्री गर्न पाउँथ्यो । कमारीको बच्चा नजन्मिए उसको लोग्ने फेरिइराखिन्थ्यो ।
सुनको फूल पार्ने कुखुरी ठानेर पूँजीपतिहरू कमारीमाथि बढी मूल्य तिर्न कस्सिन्थे । अझ, एउटी राम्री तरुनी कमारीको भाउ रु.३९० सम्म पुग्थ्यो । उमेर र लिङ्ग हेरेर सामान्यतया रु.१०० देखि माथिको मोलमा कमाराहरूको किनबेच हुन्थ्यो ।
कमारा–कमारीले मालिकको घरमा असीमित काम गर्नुपर्थ्याे। दिनभर खेतबारीमा खटिएर राति घरका सबै काम सकेपछि मालिक–मालिक्नीलाई तेल घस्नेसम्मका काम गर्नुपर्ने । राति कोठामा तेल घस्ने क्रममा मालिक र कमारीको सम्पर्कबाट छोराछोरी जन्मे पनि मालिकले आफ्नो भनेर सकार्दैनथे, अन्ततः ती सन्तान पनि बेचिन्थे ।
करिया धेरै हुनेको समाजमा शान
नेपालमा दास प्रथा कहिलेदेखि शुरू भयो, त्यो त थाहा भएन । पुरानो जमानामा राजाहरूबीच लडाइँ हुँदा विजेताले हार्ने पक्षका रैतीहरूलाई करिया बनाउँथे । भारतमा हिन्दू र मुसलमानबीच युद्ध भइरहँदा त्यहाँ धेरै करिया भए । तीमध्ये धेरै नेपाल पसे । त्यसअघि नेपालमा धेरै करिया थिएनन् ।
भारतबाट एकै पटक २० हजारदेखि ३० हजार दास नेपाल पसेको भन्ने भनाइ पनि छ । श्री ३ जङ्गबहादुर राणाको पालामा १९२४ सालतिर उत्तर भारतमा ठूलो भोकमरी लागेछ । उनले तराईका बासिन्दालाई भोकमरीबाट बचाउन जिल्लैपिच्छे साढे २ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाए । त्यसपछि थुप्रै भारतीय नेपाल पसेका कारण यहाँ ३० हजार करिया बढेछन् ।
ब्रिटिश भारतकालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले आफ्नो देशका करिया नेपालमा निकासी गरेर राजस्व संकलन गथ्र्यो । भारतमा रु.४\_५ मा किनिएका तिनीहरूलाई यता रु.३०\_४० मा बेचिने रहेछ । सन् १८६६ तिर १८ महीनासम्म करियाहरूको ओइरो लागेको लेखक एवं इतिहासकार डेनियल राइटले लेखेका छन् रे !
अन्ततः जङ्गबहादुरलाई यो दासत्वले नेपाललाई पोल्छ भन्ने लागेछ । उनले करियाहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यले चारबुँदे निर्णय गरेछन् ।
जस अन्तर्गत, नेपाल सिमानाका कर्मचारीलाई करिया खरीद–बिक्री हुन नदिन निर्देशन दिएका उनले पछिल्लो समय किनिएका भारतीय करियाहरूलाई तुरुन्तै मुक्त गर्न, आफ्ना केटाकेटी बिक्री नगर्न तथा मोरङ र नयाँ मुलुकमा भागेर गएका करियालाई फेरि नफर्काउन उर्दी दिएका थिए ।
त्यतिवेलाको नेपाली समाजमा सीमित धनी वर्गको इज्जतको एउटा मापदण्ड थियो, उसको घरमा कमारा–कमारी कति छन् । कतिसम्म भने, धनवानले छोरीको विवाहमा अरू कुरासँगै कमारा–कमारी पनि दाइजोका रूपमा दिन्थे ।
दास प्रथा उखेल्न कति मुलुकहरूमा लामो समयसम्म दङ्गा फसाद र मारामारी भएका थिए । नेपालमा भने करिया अमलेख (दासत्व मोचन) सहजै भयो ।
श्री ३ चन्द्रशमशेर अगाडि देवशमशेर र जङ्गबहादुरले पनि यो प्रथा हटाउन चाहेका थिए रे ! तर सकेनछन् । करियालाई मालिकहरूले राजीखुशीले निःशुल्क रूपमा मुक्त गरून् भन्ने मनसाय चन्द्रशमशेरले राखेका थिए । तर, ५१ हजार ४१९ कमारा–कमारीमध्ये जम्मा ४ हजार ६५० लाई मात्र स्वेच्छाले मुक्त गरिएछन् ।
११० जना करिया मालिकको थैली बुझाएर मुक्त भएछन् । निःशुल्क मुक्त गर्न नचाहने मालिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन श्री ३ चन्द्रले पशुपतिनाथको भण्डारबाट रु.१४ लाख झिकेर बाँडेछन् ।
१४ मंसीर १९८१ मा सदर टुँडिखेलमा रहेको खरीको बोटबाट उनले करिया अमलेखको घोषणा गरे । उनको नेपाली भाषाको ५७ पृष्ठको भाषण गुरुज्यू हेमराज पाण्डेले पढेका थिए भने अंग्रेजीको भाषण बडाकाजी मरिचमान सिंहले । यसको कार्यान्वयन भने चन्द्रशमशेरले घोषणाको १४ महीनापछि १ वैशाख १९८३ बाट गरे ।
१९८१ सालतिर श्रमको मूल्य हुने कुरै भएन । गाउँघरमा दैनिक ज्याला जनही एक\_दुई आना वा एक–दुई माना चामल थियो । कमारा–कमारीको मोल रु.१०० देखि रु.३९० सम्म तोकिए पनि करिया अमलेखका वेला औसत रु.१२० तोकेर मालिकलाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो ।
मालिकले १६ वर्षसम्म करिया पाल्दा लाग्ने खर्च रु.४१० निस्कियो । चन्द्रशमशेरले मालिकले पाएको रु.१२० त्यो अवधिभित्र दश प्रतिशत ब्याजमा लगाउँदा रु.११०० आम्दानी हुने हिसाब निकालेर चित्त बुझाएछन् ।